Ofụri Esịt-ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa US na EU ọbịa ga-abụ a Boon Iji UK Economy
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » Ofụri Esịt-ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa US na EU ọbịa ga-abụ a Boon Iji UK Economy
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ịtụ egwu • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Ndị ọbịa US na EU gbara ọgwụ mgbochi zuru oke ga-enwe ike ịga njem na-enweghị oke na England.
Ngalaba njem na njem nlegharị anya UK ga -enweta nkwalite dị ukwuu site na iwu ọhụrụ.
Ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem ụgbọ mmiri ga -eku ume.
Ọ na -atụbakwa ụgbọ elu na azụmaahịa n'akụkụ niile nke ndụ.
Virginia Messina, WTTC Onye isi osote onye isi ala na onye isi oche, kwuru, sị: “Ngalaba njem & njem nlegharị anya-yana akụ na ụba UK-ga-enweta nnukwu nkwalite na-esochi ozi na ndị ọbịa US na EU gbara ọgwụ mgbochi ga-emecha nwee ike ịpụ iche na England.
“Industrylọ ọrụ ụgbọ mmiri ahụ ga -eku ume nke ukwuu na mbido mmalite njem ụgbọ mmiri mba ụwa si England enyela ọkụ na -acha akwụkwọ ndụ, na -enye olile maka mpaghara nke gbalịsiri ike na -aga n'ihu.
“Ọ na-atụkwa ndị na-anya ụgbọ elu na ndị azụmaahịa n'akụkụ ndụ niile, site na inye aka weghachite njem transatlantic dị mkpa yana njikọ dị mkpa na EU.
“Agbanyeghị, belụsọ na ọ bụ mmeghachi omume na US zara ajụjụ yiri ya, anyị agaghị ahụ uru zuru oke.
“Nnyocha na -egosi na tupu oria ojoo a ndị ọbịa US na UK nyere ihe karịrị ijeri £ 4 ijeri akụ na ụba na 2019, na -egosipụta mkpa njem njem transatlantic.
“Anyị chọrọ ngwa ngwa ijikọ ụwa ọnụ iji mepee ókèala maka njem mba ofesi dị mma maka ndị ọbịa niile gbara ọgwụ mgbochi ma ọ bụ nwee ike igosi ihe akaebe nke ule COVID-19 na-adịghị mma.
"Harmonization ga -eweghachi ngagharị mba ofesi, hụ na ogbugbu ogbugbu maka ndị njem ọgwụ mgbochi, na -ekwusi ike mkpa ọ dị ịnabata ọgwụ mgbochi ụwa niile, ma mee ka iji 'gafere ahụike dijitalụ' zuru ụwa ọnụ."